Ny capacitor sarimihetsika dia capacitor mampiasa sarimihetsika plastika ho dielectric, izay singa elektronika passive izay mitahiry sy mamoaka angovo elektrika amin'ny endrika electrostatic, izay azo zaraina ho ratra, lamination, tazo ary tsy misy modely araka ny endriky ny rafitra, izay ny boky Wide fampiharana manodidina karazana tsy mahazatra
Ny capacitor dia fitaovana insulating ao amin'ny fitaovana insulating eo anelanelan'ny pole metaly conductive fitaovana ary mitahiry sy mamoaka angovo elektrika amin'ny endrika electrostatic, ary afaka miasa, tun, sivana, coupling, rectification, manasaraka DC malefaka ao amin'ny faritra elektronika. Bypass, coupling, sns, be mpampiasa amin'ny isan-karazany avo sy ambany matetika capacitors, dia singa elektronika fototra tena ilaina amin'ny tsipika elektronika. Ny capacitor film manify dia capacitor mampiasa sarimihetsika plastika ho fitaovana.
Ny capacitor sarimihetsika dia manana karazana fahatsapana ho ratra amin'ny electrode anatiny, ary ny karazana tsy inductive dia mifatotra amin'ny tariby mipetaka amin'ny faran'ny tariby na electrode terminal. Ny inductance dia kely ary ny toetra matetika avo dia kely raha oharina amin'ny inductance. Mandritra izany fotoana izany, ny inductive winding dia afaka mampihena ny fahaverezan'ny sarimihetsika capacitor ary manatsara ny fiainan'ny capacitor. Ny capacitor sarimihetsika manify laminated dia kely noho ny hatevin'ny ratra sy ny boky ary mety amin'ny vokatra elektronika kely. Ny karazana winding dia mety kokoa ho an'ny mainstream sy pulse circuits, ka ny karazana winding dia be mpampiasa amin'ny sivana, kolikoly, bypass, coupling, ary ny fampihenana ny feo amin'ny fitaovana elektrika elektronika.
Kapasitor decoupling: Ao amin'ny faritra elektronika dia azo omena ny famatsiana herinaratra azo antoka kokoa, ary ny singa fampihenana dia ampifandraisina amin'ny tabataban'ny fiafaran'ny famatsiana herinaratra, manivana kilasy singa izay manelingelina ny fanelingelenana famantarana.
Sivana: Ny rouleur wavy ny sawtooth aorian'ny fanitsiana dia smoothed, akaikin'ny DC.
Coupling: Amin'ny maha-pifandraisan'ny faritra roa, ny famantarana AC dia avela handalo sy hamindra amin'ny dingana manaraka.
Bypass Capacitor: Ny capacitance izay voasivana amin'ny alàlan'ny singa avo lenta amin'ny AC amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana izao sy ambany matetika.
Foil simika: Ny velaran-tany dia miitatra aorian'ny electrochemistry na harafesina simika amin'ny alàlan'ny etching electrochemical na simika, ary avy eo dia miforona amin'ny alàlan'ny sarin'ny sarimihetsika oksida (gazy aluminium).
Fihodinana: Enti-milaza dingana iray izay mandratra amin'ny fonosana isan-karazany araka ny fepetra sasany.
PET: Polyethylene terephthalate dia resin mahazatra eo amin'ny fiainana.
PEN: Ethylene glycol ester amin'ny polymethyl naphthalate dia polymère tsara mipoitra, ary ny rafitra simika dia mitovy amin'ny PET.
PP: Polypropylène, dia polymer miforona amin'ny fampidirana polymerization.
PPS: resin thermoplastic avo lenta vaovao.
Sarimihetsika capacitor azo zaraina ho karazana winding, lamination karazana, inductive karazana ary tsy inductance.
Film Capacitor Parameter Description - karazana dielectricc telo samihafa2021-12-08
AC miasa, RC surge absorption circuit design & component selection2021-12-08
Famintinana ny fampiharana ny kapasitera sarimihetsika sinoa amin'ny sehatry ny angovo vaovao 20212021-12-08
Film capacitor - famaritana sy fanasokajiana2021-12-08
Film capacitor - famaritana sy fampiharana2021-12-09